Soo -saaraha iyo Warshadda Mashiinka Been -abuurka ee ugu Fiican | Duolin
Been -abuurka Induction qalab
Awoodda korontada: 100-1500KW
Ballaca Bar: 25-200mm
Soo saar: 0.2-4T/h
Heerkulka: 800-1250 ℃
Waxyaabaha: Birta kaarboon, naxaas, bir, birta daawaha, birta aan lahayn, aluminium
Codsiga: Bar, saxan fidsan, kuleylka dhamaadka bar, dhammaadka baarka fidsan, dhammaadka tuubbada, iwm.
Been-abuurka Induction waxaa loola jeedaa in la isticmaalo kululeeyaha induction si loo kululeeyo biraha kahor intaan la been abuurin iyo sameynta. Caadi ahaan biraha waxaa lagu kululeeyaa inta u dhexeysa 1,100 iyo 1,200 ° C si loo kordhiyo dabacsanaantooda iyo socodsiinta gargaarka geerida been abuurka ah.
Induction waa soo saartaa oksaydhka oo yaraada, si sahlan loo xakameeyo heerkulka kuleylka iyo waqtiga, si dhaqso leh u kululee, hubi tayada wanaagsan ee abuurista gabal shaqo, ilaali aaladda mashiinka been abuurka.
Kuleylka billet -kagelinta khadka kululaynta guud
Qalabka kululaynta Induction oo leh inductor Afyare ee kulaylinta qayb ahaan
Khadka kuleylka induction oo isku dhafan: korontada induction oo lagu dhisay inductor, shuruud yar oo boos, koontaroolka PLC.
Tiknoolojiyadda kululaynta Induction ayaa si isa soo taraysa loogu adeegsadaa codsiyada been abuurka warshadaha sababta oo ah waxay bixisaa isku -darka aan laga adkaan karin ee xawaaraha, joogtaynta, xakamaynta iyo hufnaanta.
DUOLIN waxay bixisaa kululeeye billet induction oo loo isticmaalo kululaynta baaxad balaadhan oo ballaar iyo dhexroor billet.induction power supply is the latest generation; kaa caawiya inaad ka faa'iidaysato warshadaha been abuurka ee casriga ah.
• Ma jiraan gaasas guban kara
• Kulaylku si dhakhso ah ayuu u yareeyaa maqaarka oksaydhka ee ku yaal biilka
• Hagaajinta jawiga shaqada
• Heerkulka kululaynta lebiska ayaa kordhiya nolosha dhimashadda
• Si joogto ah u shaqeeya, 24 saacadood oo aan joogsi lahayn
• Lagu bilaabo 100% culeys kasta
• Faragelinta yar ee qalabka kale ee aqoon isweydaarsiga (Waxaa caddeeyay CE)
• Teknolojiyada leexashada IGBT & naqshadeynta wareegga taxanaha LC waxay gaaraan keydinta tamarta ilaa 15% -30% marka la barbar dhigo farsamada SCR
• Way fududahay in la shaqeeyo oo la dayactiro
• U soo bandhig PLC si ay u dhammaystirto khadka wax -soo -saarka oo dhammaystiran iyo soo -saarka kululaynta oo sarreeya
• Kaalmeeyeyaasha gudbinta ama quudinta silsiladda iyo nidaamka sixirka heerkulka
• Naqshadeynta naqshadeynta si ay ula jaanqaado beddelka induction duolin waxay hubisaa awoodda wax soo saarka ugu badan
• Qaab -dhismeedka nidaamka been -abuurka oo dhammaystiran
Waa maxay macluumaadka aan u baahan nahay inaan ogaano ka hor intaanan bixin mashiinka kululaynta induction for forging
1: Maaddada baarka kulaylka, birta kaarboon ama birta birta ah
2: dhexroorka billet kululaynta iyo dhererka kululaynta
3: Wax soo saarka kululaynta saacad kasta cabbir kasta
4: Wuxuu u baahan yahay kululaynta guud ama kulayl ahaan qayb ahaan
5: Buugga quudinta ama si otomaatig ah
6: Wuxuu u baahan yahay heerkulbeegga infrared ama uma baahna
7: Wuxuu u baahan yahay nidaamka qaboojinta biyaha iyo in kale
Hore: Mashiinka foorarsiga Induction
Xiga: mashiinka adkaynta induction
mashiinka foorjada induction
mashiinka kululaynta induction
cutubka awoodda induction